Lammileen biyyatti Isaayaas Afawarqii aangoo akka gadhiisaan gaafataa jiru - BBC News Afaan Oromoo
Lammileen biyyatti Isaayaas Afawarqii aangoo akka gadhiisaan gaafataa jiru
Image copyright Girmay Andom
Lammileen Eertiraa kumaatamatti lakka'aman midiyaalee hawaasaarratti paartii tokkichaan buluun akka goolabamu waamicha dhiyeessaa jiru.
Waggoota dheeraaf ollaa Sudaan hoogganaa kan ture Omaar al-Bashiir aangoorraa bu'uun tattaaffii Pirezedanti Isaayaas Afawarqi aangoorraa buusuuf humna nuuf ta'aa jedhanii abdatu.
Afaan Tigireetiin #Yi'akil (Ni gaha) jechuun, Afaan Arabaa fi kanneen biyyatti keessatti dubbataman birootiin dargaggoonni hidda dhaloota Eertitraa qaban biyyoota Ameerikaa fi Awurooppaa jiraatan cunqursaa biyyatti keessa jiru akka jijjiramuuf duulatti jiru.
Qabsoo walabummaa Eertiraa keessatti namoonni hirmaataa turan kan akka Roobeel Misheel fi Yohaannis Tikaaboo maqaa masoo 'Waddii Takiboo 'jedhamuun beekamu duuula kana deeggara jiru.
Pirezidantin Eertiraa Itoophiyaa daawwachuufi
Biyyaa isaatii waggaa jahaan dura bahuuf kan dirqame Tiikaaboon vidiyoo dhiheeny akan gadhiiseen akka himeetti, 'qoodiinsi, baqannaa fi imallii sukkanneessaan haa hafu,' jechuun ergaa dabarseera.
'Dhoksuu haa dhaabnu'
Amaanu'e Dawaa Ameerikaa Waashingtan DC kan jiraatu yoo ta'u, namoota duula mormii kan eegala keessaa tokkot. Haaluma kanaanis sodhaachuu yaa dhaabinu jechuun namoonni waa'ee Eeritiraa kan paartii tokkichaan bulaa jirtu tanaa akka dubbatani waamicha taasiseera.
Pirezidaanti Isaayaas bara 1993 Eertiraan walabummashi wayita labsattu aangoo erga qabatanii booda, takkaa filannoon gaggeefamee hinbeeku.
Akkumma aangoota biyyoota Afriikaa biraa filannoo itti fakkeessulleen gaggeefamee hinbeekamu.
Walabummaa ganna 28 Eertiraa, eessaa garam?
Bulchiinsi Isaayaasis mormitooti akka hinsochoone fi midiyaaleen walabaa akka hinjiraanne dhorkeera. Akkasumas, qeeqxoota sirnichaa hidhuun, humni waraanaatiin dirqisiisuun umuriin aangoosaa dheereefataa jiran jechuun dubbatu mormitoonni.
Tarkaanfiin kunis lammiileen kuma kudhatti lakka'aman biyyaa baqachuun gara biyyyota Awuroppaatti akka godaanan kan taasisee yoo ta'u, hedduunis imalarratti gammoojji Sahaaraa fi galaana Meeditiraaniyaani keessatti lubbuu saanii akka dhaban taasiseea jedhu.
Namoonni muraasni yaadannoo saanii tibba leenjii loltummaa kaampii Saawaa yaadachuun tiwiitara irratti barreessaniiiru. Saawaan lafa itti dargaggoonnii fi barattoonni sadarkaa lammaffaa leenjii loltummaa itti fudhatan yoo ta'u, dhumni leenjii kanaa yoom akka ta'e hinbeekamu jechuun komtu qeeqxoonni bulchiinsa biyyatti.
Image copyright @ABITECL
Duula kana eegalsiisuu BBC Tigrinyaatti kan hime Obboo Amaanu'eel ''hanga yoomiitti eenyummaa keenya dhoksinee jiraanna jechuunan duula kana eegale. Kaayoonni duula kanaa inni guddaanis eenyummaa kenya ifatti himuun ummataa fi motummaa Eertiraatiif ergaa keenya ifatti dabarsuudha,'' jedheera.
Haa ta'u malee, duula midiyaalee hawaasaa Amaanu'el fa'ii kanan ilaalchisuun biyya Ingiliziitti oggannaa damee dargaggootaa kan paartii biyya bulchuu kan ta'an Obbo Siiraak 'duula midiyaalee hawaasaa irratti egalaman hunda keessa duula badaa'' jedhaniiru.
Deegaraa motummaa Eeritiraa kan ta'e Tasfaa News ammoo marsariitii isaa irratti ''Duula kan keessa harka Adda Bilisa baasaa Ummata Tigireetu(TPLF) jira,'' jedheera.
Kana maleess 'lammiileen Eeritiraa biyya keessaa fi biyya alaatti argaman piroppaagaandaa Adda Bilisa baasaa Ummata Tigreen (TPLF) Eeritiraa diiguuf taasiftu kana dhagahu hinqaban'' jechuun akeekachiiseera marsariitiin oduu kun.
Obboo Amaanu'eel garuu DUULA #Enough campaign' kanarratti dhiyaatu hinfudhatu.
Duulli karaa fuula feesbuukii fi tiwitaraatiin eegalame kunis nama beekamaa ykn hirriyyaa tokko filachuun rakkina Eeritiraa keessa jiru akka dubbatu taasisuu. Yaadni kunis kan fudhatamee 'BuckeChallenge' irraa akka ta'e himama.
Image copyright @HABABA_RORA
Amaanu'eelis duula kana akka jalqabiitti fudhateera. 'Lammiileen eeritiraa biyya alaa jiran yoo motummaa qeeqani firoonni isaanii biyyatti argaman irra rakkinatu gahaa, tajaajilawwan hawaasummaas argachuuf rakkachu danda'u jechuun yaaduu hinqabaatu,'' jedha.
Kana malees duulli kun kaayyoo mormitoota motummaa hunda gara tokkummaatti fiduu akka qabu BBC Tigirinyaatti dubbateeraa Amaanu'el.
Lammiileen bakka jiraataniitti sababii amantaa, eddoo itti dhalataniifi hawaasa keessa jiraataniin gareewwan xixiqqoon wal qoodaniiru. Qoodinsa kana dhaabuun humna keenya hunda tokko taasisuun sirna paartiilee hedduu akka dhufuuf hojjachuu qabna,'' jedheeras.
Eeritiraanoonni hedduunis tibba walitti bu'iinsi waggoota dheeraaf ture dhaabachuun waliigalteen nageenyaa Itoophiyaa fi Eeritiraa jidduutti bu'ee tureetti haalli siyaasa Eeritiraas ni geedarama abdii jedhu ummatanii tura.
Garuu qabatamaan waanti ergasii mullate jiraachu dhabamunsaa duula kanaaf isaan kakaasuu ni himama.
Pirezidaanti Isaayaas erga waliigaltee nageenyaa Itoophiyaa waliin mallatteessanii booda kaabinee walgahiif kan waaman yeroo tokkicha qofa ta'uu maddeen ni mul'isu.
Akkasumas haasawa sirna kabaja guyyaa walabummaa waggaa 26ffaa irratti taasisaniinis fooyya'iinsa sirnaa ilaalchisuun kan jedhan omtu hinturree.
Isaayaas: Pirezidaantin Eertiraa obbo Isaayaas maaf Itoophiyaatti deebii'an laata?
15 Onkololeessa 2018
Pirezidantin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii waggoota dheeraa booda Itoophiyaa daawwatu
Itiyoo-Ertiraa: 'Jila Eertiraatiif simannaa ni taasifna'' Obbo Mallas Alam
22 Waxabajjii 2018
Feestivaalli biskileetii Ertiraa jeequmsaan danqame
24 Caamsa 2019
Namichi xiyyaara balali'uf jedhu gubbaa yaabe eessa dhaquufi?
Aljeeriyaan Waancaa Afrikaa irra-aante